Dhakhtar qalliin waji qurxin ka qaldamay oo baxsaday - BBC News Somali
Dhakhtar qalliin waji qurxin ka qaldamay oo baxsaday
Xigashada Sawirka, Catherine Roan
Qalliinnada waji qurxinta ayaa ah mid aad uga soo badanaya dalka Brtitain, iyada oo sanadki hore oo keli ah 65,000 oo qalliin ah la sameeyey. Balse BBC oo amuurtan u kuurgashay waxay ogaatay iney jiraan shirkado kooban oo dibadaha ka yimaadda si ay qaliinno ay u sameeyaan, haddii uu bukaankaasi dhib uu kala kulmo qalliinkana dalka isaga baxa.
'Sankeyga waxaa dib looga sameeyey feerteyda cad laga jaray'
Catherine Roan waxay qalliin isugu sameysay si ay sankeeda oo weynaa ay u yareyso kaddib marki ay dad badan sanka weyn dartii ay ugu yeerayeen sanweyne.
Khubaradu waxay sheegeen qalliinka gabadhan sankeeda lagu sameynayo si sankeeda weyn ee weliba shilka galay wax loo qabto ay mareyso seddex marxaladood.
Antonio Ottaviani oo ka howlgala xaruunta Edinburgh oo qalliinnada lagu sameeyo dalka talyaanigana ka yimid wuxuu ku talabixinayaa in qalliinka ugu wanaagsan uu yahay kan loo yaqaannoo rhinoplasty.
50 jeer ayaa wajiga laga qalay si ay qof ay ka heshay ugu ekaato
Afar sano kaddib dhakhtarki ka soo jeeday dalka Talyaaniga wuxuu ku soo noqday dalka Scotland si uu u sameeyo seddexdi marxaladood ee Catherine loo sheegay inuu qalliinka sanka looga sameynayo uu marayo.
Marxalad kasta waxay igu abuurtay Niyad jab iyo xanuun aad u badan ayey tiri Catherine mar ay ka hadleysay qalliinnada lagu sameeyey.
Xigashada Sawirka, Rebecca MacPhail
Marka faashaddi ugu dambeysay ee qalliinka afaraad loo xiray laga furay, waxa meesha ay kala kulantay arrin walwal iyo walbahaar ku dhalisay.
"Sankeyga sidi uu ahaan jiray wuuba ka sii xumaaday" ayey tiri. "maqaar aad u weyn ayaa ka lalmay sankeyga dhinacna maqaar aan meelna haysan ayaa sida oo kale ka lulanayey, wax iney khaldan yihiin waa dareemeysaa" ayey tiri.
Mr Ottaviani wuxuu ku laabtay dalka Talyaaniga, kalkaaliyeyaasha caafiamadka ee la shaqeynayey sawirka sankeyga qaaliinka kaddib ayey marar badan u direen. Wuxuuna ballanqaaday sankeyga inuu wax ka qabanayo balse Catherine waxay meesha ku weyday kalsoonidi waxayna diidday in qalliin kale lagu sameeyo.
Dhakhaatiir badan ayaa diiday iney gabadhaasi wax u qabtaan iyaga oo diiday iney arrinta gabadhan faraha la soo galaan, balse nasiib wanaag shan sano kaddib waxay waafaqday dhakhtar Britain u dhashay inuu qalliin ku sameeyo.
Nin qaliin caloosha ah lagu samaynayay oo ay arrin kale ku dhacday
Dhakhtarka ugu dambeeyey ee ku guuleystay qurxinta sanka Catherine wuxuu adeegsaday qayb ka mid ah feer uu gabadha ka jaray iyo dheecaan uu madaxeeda ka qaatay.
Catherine waxay tiri, "Dareen xiiso leh" ayaan dareemay feerta cadka laga jaray maadaamaa ay xanuuneysay bogga uma seexan karin "kharash aad u yarna wey bixisay" si sankeeda si kama dambeys ah looga saxo loogana qurxiyo.
Dhakhtarka oo lagu amray inuu magdhaw ahaan gabadha uu u siiyo £200,000 oo gini
Xigashada Sawirka, Antonio Ottaviani
Catherine waxay gudagashay iney Mr Ottavani ay sharciga la tiigsato.
Khubarada xaaladda gabadha baatitaanka ku sameysay waxay sheegeen inuu dhakhtarka uu ku guul darreystay inuu gabadha uu sharraxadaa uu ka siiyo seddexda qalliin uu gabadha ku sameeyey khatarta ay kala kulmi karto.
Hade yeeshee, marki ay dhakhtarka kaga guuleystay maxkamadda haddana lacagti loo xukumay 1% oo keli ah ayey heshay, taasoo Catherine ka dhigeyso iney weli guuleysan.
BBC waxaa kale oo ay ogaatay iney jiraan 6 haween ah oo kale oo Mr Ottaviani sida uu ula dhaqmay ka cabanaya.
Maxkamad ayaa gabar kalana u xukuntay inuu £100,000 oo gini oo magdhaw ah uu siiyo, inkasta oo lacagtaasi ay gabdha kale waxba ka soo gaarin.
Maxaa loo oggolaaday iney arrimahan dhacaan?
Baaritaanka ay BBC sameysay waxaa lagu ogaaday kumannaan qalliin ah iney sanad walba sameeyaan dhakhaatiir dibadaha ka timaaddo, marki ay qalliinnada sameeyaan kaddibna ay dalalkooda dib ugu noqdaan.
Qalliinka uu dhakhtarka ajnabiga sameeyaan haddii uu guul darro ku soo dhammaado dalka degdeg ayay uga baxayaan iyaga oo weliba diido iney bukaannadi ay qalliinka ku sameeyeen caawiyaan.
Kulliyadda qalliinka ee Royal waxay BBC u sheegtay sharciyada u yaallo qalliinnada waji qurxinta iney yihiin kuwa aan xoog badneen taasoo mararka qaar bukaanka ku keenta inuu sharciga difaaci waayo.
Ken Stewart, oo qalliinnada waji qurxinta ee loo yaqaanno plastic surgey kala taliya xukumadda Scotland, wuxuu sheegay sharcigu inuusan ahayn "mid xooggan". Wuxuuna sheegay iney lagama maarmaan tahay in shahaadada fasaxa qalliinka u haysto qof walba oo qalliin sameynaya.
Xukumadda Scotland waxay BBC u sheegtay iney tallaabbooyin dheeri ah ay u qaadayaan arrintaasi, tallaabooyinkaasi oo ay ka mid yihiin iney la kulmaan wasiirrada Britain ee ay arrintan quseyso.
'Ma awoodo inaan muraayadda hor istaago'
BBC waxay sida oo kale la kulantay haweeney kale oo ay dhakhaatiir "dalka soo gala, kana baxa" ee sameeya qalliinnada waji qurxinta ay tayadooda wanaagsaneen.
Kirsty Adam oo ka soo jeedda Motherwell ee waqooyiga Lanarkishire, waxaa 2015-kii naasaha looga sameeyey qalliin. Qalliinkaasi oo ay dhibaata badan oo caafimaad ay ka dhaxashay dhibaatooyinkaasi oo ay ka mid yihiin ibta naaska oo qarsoontay iyo dhaawacyo ka soo gaaray.
"Kalsoonidi aan isku qabay wey dhamaatay. Muhiimad badan malaha inaad bogsato, waxaad weli ogaaneysaa dhibaatada kale ee aad ka dhaxashay." ayey titi Kirsty.
"Markasta oo aan meyranayo, muraayadda inaan eego waan iska ilaaliyaa."
Bukaanka kale ee qalliinnadaasi dhibaatada kala kulmay waxaa ka mid ah Tracey Foley, oo ka soo jeedda Clydebank, waxay sheegtay qalliin afar sana ka hor naasaha looga sameeyey ay sababtay ibta labada naasood inuu midna sarreeyo midna hooseeyo.
Trecey oo kiiskeeda maxkamadda geysay waxaa loo xukumay in laga bixiyo dhammaan kharashaadka ku baxaya qalliinnada.
Dhakhtarka ku laabtay Rumania
Xigashada Sawirka, Observator
Kirsty waxay ku andacooneysaa in dhakhtarkeeda qalliinka ku sameeysay Dr Vasilescu ay hadda ku laabatay Romania, iyada oo dacwadda iyada ka dhannaaana la laalay.
Haddii baaritaannada la soo afmeero waxaa la ogaanayaa Dr Vasilescue qalliinnada waji qurxinta ay sameysay iney ahaayeen kuwa ay tayadoodu hooseyso.
'Khubarada caalamiga ee takhasusuka caalamiga ah u leh qalliinnada'
Haweeney u hadashay dhakhtarka waxay xaqiijisay waxyaabaha ay la kulmeen Tracey, Kirsty iyo Catherine iney isku mid eheen balse 98% marka la eego natiijada ka dhalatay ay muujineyso iney waafaqsaneen "tayadi looga baahnaa qalliinnada noocaasi ah".
Waxay si gaar ah dhacdooyinkaasi muujinayaan "khaladaad shaqsiyaad ka dhacay qayba ka mid ah laba qalliin" ayey tiri afhayeenka.
"Shirkadaha ay ka socdeen dhakhaatiirta khaladaadkaasina waa iney "mas'uuliyaddooda ay qaadaan" isla-markaana ay bukaankaasi iyo dumarkaasiba ay helaan daryeel caafimaad iyo la talin aan wax lacag ah laga qaadeyn qalliinno khaladaadki dhacay lagu saxayana loo sameeyaa" ayey sii racisay.
"Dhakhtar kasta oo qalliin ka sameeynaya gudaha Britain waa inuu haystaa shahaadada fasaxa isla-markaana uu ka diiwaan gashan yahay shirkadaha caymiska ee dalka Britai.
Sida ay wargeysyada caalamka wax uga qoreen soo celinta xirirka Soomaaliya iyo Kenya